Utsanana (Bhati) Acrylic Sheet, China Utsanana (Bhati) Acrylic Sheet Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Jumei Acrylic Kugadzira Co, Ltd.
Imba>chigadzirwa>Utsanana (Bathtub) Acrylic Sheet
Sanitary acrylic chinhu chakakosha chakagadzirwa, chakagadzirwa kugadzira mabhawa. Nekuda kwekupokana kwavo nemakemikari uye nekutsvaira, hutsanana acrylic machira ndiwo sarudzo inosarudzwa yemabhawa, mataresi ekugezera. Acrylic pamusoro ndeyeyemberi uye yakasimba. Inopa hupenyu hwakareba, kutarisirwa kuri nyore uye zvido zvehutsanana zvemabhawa.
Rimwe divi rinodzivirirwa nefirmoformable yakajeka PE Firimu, ichibvumira kuchengetedzeka kwakachengeteka panguva yekuzara kwekugadzira kutenderera, mukati meindasitiri yakajairika tembiricha inoshanda.
Hwedu hwakasiyana-siyana hukuru uye ukobvu sarudzo zvinopa vatengi zvimwe sarudzo.
Product zita Utsanana vazviziva Acrylic jira / Acrylic jira nokuti tabhu / washbasin / singi / Shower tireyi
mhando Kanda (Cell Cast)
giravhiti 1.2g / cm3
Ukobvu (mm) 2mm - 5mm
Kukwanisa Kuita 2000 matani / mwedzi.
mavara chena, yero, shava, Ivory, ect..38 mavara akajairwa, tsika inowanikwa
chiputiriso Rimwe divi kupisa rinopikisa Pe firimu
zera 1900 X 960mm, 1780 X 960mm, 1250 X 2050mm, nezvimwewo kupfuura makumi mashanu saizi
MOQ 500 makirogiramu.
Mubvunzo: Unoirongedza sei?